Isikhundla se-Archicad, enye i-AutoCAD
I-GRAPHISOFT iqoka uHu Roberts njengoMlawuli oyiNtloko
Owayesakuba ngumphathi weBentley uza kukhokelela kwisigaba esilandelayo senkampani sokukhula ngobuchule; UViktor Várkonyi, i-CEO ephumayo ye-GRAPHISOFT eyintloko yeCandelo loCwangciso kunye noYilo leQela laseNemetschek. IBUDAPEST, nge-29 ka-Matshi 2019-GRAPHISOFT ®, umboneleli ophambili wezisombululo zesoftware kubayili kunye nabayili beModeli yoLwazi lweZakhiwo,…
Zingaphi iprojekthi ezifanelekile kule blogi?
Kudala ndibhala malunga nezihloko zetekhnoloji yokuphamba ngaphezulu kweminyaka emibini, ihlala isoftware kunye nokusetyenziswa kwayo. Namhlanje ndifuna ukuthatha ithuba lokwenza uhlalutyo malunga nokuba kuthetha ntoni ngesoftware, ndinethemba lokwenza uluvo, ukuqaqambisa ubuhle kunye nendlela abaphendula ngayo kwingeniso yezoqoqosho nakwigama lokuvelisa izithuthi ...
Blog Umhlaba ka-Google GvSIG OS GIS asibonise
ArchiCAD, AutoCAD-AutoDesk, Cadcorp, Google umhlaba / imephu, GvSIG, IntelliCAD, GIS asibonise, Microstation-Bentley, Ehlabathini elungileyo
Ukuthelekiswa kwee software zeCAD
Njengokuba kukho uthelekiso phakathi kwezisombululo zekhompyuter ze-GIS yeNkqubo yoLwazi lweJografi, nakwi-Wikipedia kukho itafile efanayo yezixhobo ze-CAD ezijolise kwinto esiyaziyo njenge-AEC (Uyilo, ubuNjineli noKwakha) Kukho ootitshala abasuka eyunivesithi, ngokubanzi iphelelwe lixesha exelela abafundi babo ukuba bathumele iWikipedia ...
IFayileinfo.net yindawo eqokelela ulwandiso lwefayile, ikwahlulwe ngokohlobo lwesicelo kwaye zeziphi iinkqubo ezinokuvulwa yiWindows kunye neMac. Unokwenza uphando ngokuthe ngqo, njenge .dwg, okanye kwakhona ngohlobo lwefayile, umzekelo "CAD". Esi sisiphumo esifunyenwe xa ukhetha ...
AutoDesk Bentley Systems Dgn Dwg ESRI Umhlaba ka-Google
Umfaki wefayili we-AutoDesk
Ngaphambi kokuba ibekwilebhu, kodwa ngoku ikhutshiwe njengemveliso enomsila; ngumkhangeli wefayile. http://seek.autodesk.com/ Ingasetyenziselwa iinjongo ezininzi kubandakanya ukufumana iibhloko, izinto ze-3D, izinto ze-BIM kunye nokugqwesa zonke, inokukhangelwa kwezi fomathi zilandelayo:. I-AutoCAD) .dgn (Microstation) .dxf (Ngokubanzi ...
AutoDesk Dgn Dwg
Uvuyo lweFebruwari 29, isishwankathelo senyanga
Ewe, ukuphela kwenyanga kufutshane kodwa kuyaxhuma. Nasi isishwankathelo sento epapashwe kwiintsuku ezingama-29 ezinzima phakathi kohambo kunye nomsebenzi ... Amaqhinga e-cartography Guqula i-UTM iququzelele ukuya kubume be-Excel Guqula ukusuka kwiJografi iye kwi-UTM kwi-Excel Indlela yokwenza igridi yolungelelwanisoUkutshintsha njani ingqikelelo ye ...
Blog ESRI Umhlaba ka-Google GIS asibonise egeomates My
ArchiCAD, AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, Internet kunye neBlogs, Ezahlukeneyo
I-template ye-Excel ukuguqula ukusuka kwi-Geographic Coordinates ukuya ku-UTM
Le template yenza kube lula ukuguqula i-geographic coordinates kwiidridi, imizuzu kunye nemizuzwana ukuya kwi-UTM. 1. Uyifaka njani idatha Idatha mayilungiswe ngeshiti egqwesileyo, ngendlela yokuba ize kwifomathi efunekayo. Ewe, ukuthintelwa kwesiqhelo ngokubhekisele kumanqanaba amaxabiso amkelekileyo kufuneka kuhlonitshwe ...
Iibhondi Office for ebulalayo
ArchiCAD, Iiphotography, Ukulanda
I-ArchiCAD, isofthiwe ye-CAD yamahhala yabafundi kunye nootitshala
I-ArchiCAD liqonga le-CAD ebelisoloko likho kwintengiso ixesha elide, nangona ekuqaleni yayiyinguqulelo yeMac, de kwangowe-1987 le nguqulo 3.1 yayisaziwa. Ukuba uyakhumbula, i-ArchiCAD 3.1 yayisele ikhuphisana ne-AutoCAD 2.6 ngo-1987, kanye njengeDathaCAD kunye neDrawBase, kodwa yiminyaka yabo yokugqibela ...
AutoDesk Dwg Umhlaba ka-Google
Iminyaka eyi-27 ye-Microstation
Kutshanje sithethe ngokufika kwe-AutoCAD kwiminyaka yayo engama-25 kunye nezifundo ezi-6 ezifundiweyo kwimbali yayo. Kungenxa yokuba iMicrostation yenye yeqonga leCAD elinokhuphiswano olukhulu kule marike, kwaye ngendlela enye yezimbalwa ezisahleli zisaphila kwisizukulwana esipheleleyo seenkqubo ezaphunyezwa yi-AutoCAD ...
Uyilo lwentsimbi oluPhambili
Funda uyilo lolwakhiwo usebenzisa isoftware yoyilo lwentsimbi. Yila isakhiwo esisiSiseko esipheleleyo, iikholamu zoLwakhiwo, iinkcukacha zoCwangciso lovavanyo ...